EPL: Kulankii London Derby ee dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo barbaro ku idlaaday… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Kulankii London Derby ee dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo barbaro ku idlaaday… + SAWIRRO
(London) 06 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iska lumisay fursad ay hoggaanka ugu qaban kartay horyaalka Premier League, kaddib markii kulankii London Derby ee ay soo dhowaysay Tottenham uu ku dhammaaday barbaro 1-1, waayo haddii ay adkaan lahayd Gunners hoggaanka horyaalka ayey qaban lahayd.
Arsenal ayaa goolka la horreysay waxaana kubbad laad xor ahayd (free kick) oo uu soo karoosay 42’daqiiqo dhammaadkii qeybtii hore ee ciyaarta Mesut Ozil, iska dhaliyey (Own goal) xiddiga Spurs ee Kevin Wimmer, sidaas ayaana lagu kala nastay Gunners oo ciyaarta ku gacan sarreysay 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Tottenham Hotspur ayaa la timid goolka barbaraha waxaana rigoore ugu dhaliyey 51’daqiiqo Harry Kane, kaddib markii difaaca Arsenal ee Laurent Koscielny uu jilaafay Moussa Dembele oo ku jiray xerada ganaaxa, sidaas ayuuna kulanku ku noqday gar isku mid ah 1-1.
Difaaca kooxda Tottenham ee Kyle Walker ayaa 79’daqiiqo dhaawac looga saaray garoonka, waxaana soo galay oo lagu bedelay Kieran Trippier.
Kooxda Tottenham ayaa ku dhowaatay inay goolka kale ka dhaliso Arsenal kaddib markii uu bulusoon toos ah oo uu soo tuuray 84’daqiiqo uu birta ku dhacay, kulanka ayaana ku soo dhammaaday barbaro 1-1.
Arsenal ayaa sidaasi ku lumisay fursad ay hoggaanka ugu qaban kartay horyaalka Premier League waxaana ay haatan fadhisaa kaalinta 3’aad iyadoo leh 24-dihbcood, halka Tottenham ay fadhiso kaalinta 5’aad iyadoo haysata 23-dhibcood.
LA LIGA: Real Madrid oo riiqday Leganes....(Bale oo baashaalay iyo Ronaldo oo ka jajabnayd)+SAWIRRO
Gareth Bale oo maanta buuxsaday 150 gool… (Ka bogo qaabka uu u kala dhaliyey goolashaas)